Amapayipi aphikisayo anezinzuzo nezinkinga zabo. Inzuzo enkulu yemibala enjalo ukuthi idayi izinwele zakho unomphela. Noma kunjalo, ama-inks aphikisayo angalimaza izinwele zakho. Imininingwane eminingi mayelana nokusebenza kwamapende okuphikisana kuzoxoxwa kulokhu kulesi sihloko.
Ziyini amapende aphikisayo?
Ukupenda okuqinile kungcolisa izinwele, kodwa kubangela izinwele ezingaphezu kwalawo amancane okwesikhashana, ama-shampoos kanye nama-balms. Futhi uma usebenzisa kabi upende, khona-ke esikhundleni sombala omuhle namapendleli amhlophe ungathola izinwele ezonakalisiwe, ezomile neziphukile.
Noma yiluphi upende olunomthelela luqukethe izithako ezisebenzayo namakhemikhali ahlukumezayo abasiza ukudweba ukungena emgodini wezinwele nokuwuphahla. Amapayipi amaningi afaka ammonia noma i-oxidizer. Ngamanani amancane lezi zinto ziphephile kubantu, kodwa yikuphi okungcono - kunzima ukuphendula.
Esikhathini samanje emashalofini ungathola imikhiqizo ye-bezammiachnoy. Kukholelwa ukuthi upende olunjalo luphephile ngokuphelele. Kodwa intengo yayo inkulu kakhulu, ngakho-ke akuzona zonke izintombi ezingakwazi ukuthenga upende olunjalo. Ngaphezu kwalokho, abanye abakhiqizi esikhundleni salesi setshenziswa basebenzisa i-peroxide elula, ephanga izinwele. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthenga upende, funda ngokucophelela ukwakheka kwayo. Uma kukhona i-oxidizer, ngakho-ke akukho sikhombiso sokukhokha ngokweqile ukuhamba komkhiqizo noma ukukhangisa.
Ukupenda okuqhubekayo kufanele kusetshenziswe ukudweba izinwele ezimpunga, njengoba upende oluvamile luzosiza ukubhekana nale nkinga. Kuzodingeka futhi usebenzise ukugaya okuqhubekayo futhi uma kwenzeka ufuna ukuthola umthunzi ogcwele ogcwele, ozohlala ezinyangeni zakho isikhathi eside.
Kukhona i-nuance eyodwa ongakwazi ukuyikhohlwa - yisikhathi sokuvelela izinwele ezinwele. Ukupenda okuqhubekayo kufanele kugcinwe njengoba nje umkhiqizi eluleka, uma uyinqobe ngaphezu kwalokho okudingayo, khona-ke uma ugeza, uzothola izinwele eziwihliwe. Uma uhlala ungaphansi, ngeke uthole umphumela, ngoba ngeke kube nenqubo ye-oxidation futhi izinto ngeke zingene ezindongeni zezinwele.
Ukungahleleki koboya bezinwele eziphikelela
Amamakhemikhali amanye amakhemikhali akakaze alethe izinzuzo ezinyaweni. Ikhwalithi ephindwe kabili kanye nedayisi ephuthumayo yobuchopho obuqhubekayo kuyokwenza izinwele zakho zibe mnandi futhi zibe mncane. Ngemuva kokusebenzisa imibala enjalo kuzodingeka usebenzise njalo imikhiqizo yezithokozi ezikhethekile: ama-shampoos, ama-balms, ama-masks.
Ukuzibamba izinwele ngamapende aphikisayo akunconywa. Njengoba akubona bonke ochwepheshe abangakwazi ukugqoka kahle izinwele ngemikhiqizo enjalo, bese-ke ukuthi yini ongayitshela kulabo abasha? Uma kukhona okungahambi kahle ngesikhathi sebala, awukwazi ukuthi kungani izinwele azitholanga umthunzi ofanayo. Ngaphezu kwalokho, ngemva kokuhlolwa okunjalo, amantombazane amaningi ahamba ngezinwele zawo futhi ayingqayizivele.
Izinzuzo zepende eliqinile
Inzuzo enkulu yale mikhiqizo ukuthi ihlala isikhathi eside ezinyaweni. Ungakwazi ukushisa elwandle ngokuphepha, ugeze olwandle noma echibini futhi ngesikhathi esifanayo ungesabi ukuthi upende luzohlanzwa kusukela ezinyaweni, futhi kuthebhu noma ku-swimsuit kuyoba neminye imikhakha. Uma uzongena izimpande zezinwele zakho ngesikhathi, akekho owaziyo ngisho nokuthi umbala wakho unjani.
Uma ungafuni ukulimaza kakhulu izinwele zakho, qiniseka ukuthi uthenga imikhiqizo ephezulu kuphela, equkethe izinto ezibuyisela ukwakhiwa kwezinwele futhi uzivikele emiphumeleni eyingozi yemvelo. Kungaba izithako eziwusizo, amavithamini, amafutha, amakhambi nokunye okunye.
Yenza okuthandayo kuphela ngezingubo eziphezulu ezikhiqizwa ngemikhiqizo eyaziwayo. Zivikelekile futhi ukusetshenziswa kwazo ngeke kuholele emiphumeleni enzima.
Indlela yokubala izinwele ngepende ephikelela
Noma yimuphi upende kufanele uhlolwe endaweni engabonakali yesikhumba. Ngalokhu, faka upende ngendonga ye-elbow. Ngemva kwemizuzu emihlanu, ugeze. Uma kungakapheli usuku lwe-uvass kungabonakali ukuphendula okweqile, khona-ke ungakwazi ukuqhubeka nokugcoba.
Izinwele ze-Nekraste ngesikhathi sokuya esikhathini. Lezi zinsuku i-hormone ishintsha, ngakho-ke upende alukwazi ukwenza noma ungathola enye imithunzi. Futhi, awukwazi udaye izinwele zakho nomama oqinekile futhi uncelisa, ngoba izinto ezinobuthi zingangena enhlanganweni yengane. Akunconywa ukuba ugqoke izinwele kulabo abakhanyisa i-veneer noma benza imvume. Emva kwalokho, kufanele kuthathe okungenani amasonto amabili izinwele ukuba zilulame kancane.
Ngaphambi kokufaka umbala, geza ikhanda, bese upende ngisho nezinwele ziba ngcono, futhi amafutha emvelo azonciphisa kancane umphumela ohlaselayo wepende. Uma ufaka isicelo sokufaka ibala, qiniseka ukuthi usebenzisa amaglavu, ithawula, ikhefu, ikhefu elikhethekile nopende. Uma unezinwele ezinde, khona-ke udinga amaphakethe amabili epende.
Ungasebenzisi endaweni yebhulashini ekhethekile yokwenza isiponji, i-toothbrush nezinye izindlela ezifakiwe. Njengoba umphumela ungahle ungabi khona.
Ngaphambi kokugqoka izinwele ngopende ophikelela, cabanga ngokucophelela, kodwa ufuna ngempela. Ngemuva kwemibala enjalo, kuyoba nzima ukubuyisela umbala wezinwele zakho. Kuzodingeka ngilinde baze babuye emuva.
Izinwele ezidaywe: yini elandelayo?
Ngisho nopende lokumelana kahle kakhulu luhlanzwa kancane kancane. Ngakho-ke, uma ufuna ukugcina umbala ocebile wezinwele isikhathi eside, kuzodingeka usebenzise ama-shampoos akhethekile kanye nama-rinses e-conditioner ngezinwele ezinemibala. Akunakwenzeka ukusebenzisa ama-masks, anamafutha amaningi. Amaski anjalo azogeza umbala ngokushesha. Zifanele kuphela kulawo masantombazane anezinwele ezimhlophe noma labo abafuna ukuqeda ubuhle.
Amanye amantombazane ngemuva kokusebenzisa amabala kuphela ama-shampoos ezingane. Bakholelwa ukuthi ama-shampoos anjalo anezinto ezincane eziyingozi nokuthi ziwusizo kakhulu. Eqinisweni, lokhu akunjalo. Musa ukugeza ikhanda lakho ngamantombazane omntwana, njengoba bechitha isakhiwo sezinwele. Sebenzisa ama-shampoos akhethekile kuphela ngezinwele ezinemibala, ngokubuyisela amafutha nezinye izithako. Uma izinwele zisesimweni esibucayi, sebenzisa ama-ampoules, ama-lotions noma ama-mask akhethekile okwelapha esikhwameni.
Uma uthanda ukugeza ikhanda lakho ngaphansi kwamanzi ashisayo, kufanele uzinikele. Izinwele ezidwebeziwe zingageza kuphela ngaphansi kwamanzi afudumele. Ngaphezu kwalokho, amanzi ashisayo ayingozi kuphela ngezinwele ezinemibala, kodwa futhi enempilo. Ngemva kokugeza ikhanda, kubalulekile ukugeza izinwele zakho ngamanzi ajwayelekile noma ahlanzekile, lapho kudingeka khona ukwengeza i-citric acid, uviniga noma lwesinaphi. Emva kwalokhu ukuhlanza ikhanda i-pH ijwayelekile futhi i-chlorine iyahlanzwa, leyo echaphazela kakhulu izinwele futhi ingaholela ekudleni.
Uma uvame ukusebenzisa i-hairdryer, i-curling iron, i-ironing noma izinwele ezishisayo, qiniseka ukuthi usebenzisa amathuluzi akhethekile avikela izinwele kusuka ekuvezeni okufudumele. Uma kungenjalo, izinwele zizophela ngokushesha. Ngokupakisha, nikeza okukhethwa kukho imithi yamaphutha kanye nama-mousses, aqukethe izithombe zepeyinti.
Imikhiqizo yokucubungula izinwele
Izinqubo zokuvuselela izinwele ezijulile
Kungani amadoda edlala ngothando?
Indlela yokuqaphela le syndrome engenangqondo ye-premenstrual syndrome
Imicibisholo ayikwenzeki okuningi: izinketho zezinwele zezintambo ngeminsalo ngoSepthemba 1
Ukushayela nge-salmon ebomvu
Peking iklabishi isaladi nezithelo
Amakhamera e-CCTV alobe ukuhlaselwa kukayise kaZhanna Friske kuDemetriya Shepeleva
Ama-bacterium ekwelapheni kwe-gingival hemorrhage
Ubuhle baphakathi bulingana nobuhle bezingaphandle
Ummeli uVladimir Friske usola uDmitry Shepelev ngokuthumba ingane